MUQDISHO, Soomaaliya - Kulankii la filayay in maanta Xildhibaanada iska soo horjeeda ee Gollaha Shacabka ku yeelan lahaayeen xarunta Baarlamaanka ayaa u baaqday fowdo iyo qalalaase dhacay.
Gudoomiye Jawaari iyo labadiisa ku xigeen ayaa saakay wada tagey Xarunta Gollaha Shacabka, balse labada dhinacba midna kuma guuleysan inuu qabsado Kulankiisa kadib markii la isku mari waayey cida kulanka shir gudoomineysa.
Lababa garab oo kala watey saakay laba Ajande, oo kala ah Mooshinka kalsooni kala noqoshada Jawaari iyo arinta dhisamaha derbiga Kenya ee Balad-Xaawo ayaa la tagey xarunta Ciidamo kala duwan, oo qaarkood Xildhibaano wateen.
Xildhibaanada Garabka Jawaari ayaa subixii hore u suurta galay inay galaan gudaha xarunta Gollaha Shacabka, iyadoo Taliye-yaasha Ciidamada sheegeen inay la jebiyay xeerka amniga, oo lala galay Ciidamo iyaga aan ka amar-qaadan.
Cabdiweli Ibraahim Muudey ayaa isna xilli dambe soo gaarey xarunta, iyadoo ay ilaalinayaan Boolis iyo Ciidamo kale oo kuwa dowladda katirsan, xilligaasi oo gudaha dhisamaha ay buuq ka sameynayaan taageeriyaasha Jawaari.
Qaar kamid ah Xildhibaanada mooshinka keenay, oo Saxaafadda dibadda xarunta Gollaha Shacabka kula hadlay ayaa ku eedeeyay Jawaari inuu mas'uul ka yahay wixii saaka dhacay iyo baaqashada kulankooda.
Muudey iyo Jawaari ayaa dib uga soo laabtey Xarunta Gollaha Shacabka kaidb markii midba u qabsoomi waayay kulankii uu watey, waxayna ku noqdeen Villa Soomaaliya, iyadoo Xildhibaanada ay kala aadeen Hoteeladii ay kala deganaayeen.
Labada garab ayaa midba midka kale ku eedeynaya inuu sharciga jebinayo, waxaana is-mariwaaga taagan uu noqonayaa mid sii daba dheeraanaya, oo saameyn xooggan ku yeeshay Hay'adihii dowladda uu hogaamiyo Farmaajo.
Xildhibaano taageersan Gudoomiye Jawaari ayaa qaarkooda soo jeediyay in la sameeyo...